Banyere Anyị - Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
Emi odude ke Quyangqiao, Zhengding County, na-ekpuchi mpaghara nke mita 6,600. Tupu anyị amalite azụmahịa mba anyị, e megoro nnukwu ihe n'ọhịa nke Trade na China.
Thelọ ọrụ ahụ nwere ihe eji emepụta ihe na-emepụta ihe, ihe ntanye ntanetị, akụrụngwa akụrụngwa isii, akụrụngwa na-akpaghị aka na Germany. Anyị na-agbaso iwu iwu nchekwa gburugburu ebe obibi ma nwee usoro nhicha nsị. Na August 2019, ụlọ ọrụ mmepụta ihe agbasawanyere, akụrụngwa ahụ emezikwara ọzọ.
Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkọghachi na 1985. Onye nchoputa ahụ gbasoro usoro nke mmepe mba ma guzobe ụlọ ọrụ na ijikọta mmepụta na ire ahịa. Ọ ghọọla nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China.
Anyị na-amalite ịmụba otu ndị dị n’akụkụ mmiri na 2016, ma ugbu a, nwere ndị tozuru etozu na ndị ahịa.
Ngwongwo anyị na-ere n'ụwa niile (USA, UK, Czech Republic, Poland, Israel ...) Na ụlọ ahịa anyị ị nwere ike ịchọgharị site n'ụdị dị iche iche, site n'oge a ruo n'ọgba na ihe niile dị n'etiti. Ahịa na ụlọ ahịa anyị niile bụ nke abụọ, yabụ ị ga - ejide n’aka na ị ga - ahụ ihe pere mpe.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ndị ahịa anyị chee na ha bụ kpakpando nke ha. Site na ngwaahịa anyị mepụtara na ọrụ ndị ahịa anyị, anyị na-ahụ na ihe niile anyị mepụtara bụ ogo dị elu yana na ejiri ịhụnanya na nlekọta lekọta onye ọ bụla. Anyị na-agba mbọ isetịpụ ihe nlereanya nke ikwe ka ịma mma gị na-egbukepụ ma na-enwu n'ime.
Anyị maara na mgbe ụfọdụ anyị enweghị ihe ị na-achọ na ngosi, mana ọ bụrụ na ị nye anyị ohere igosi gị ọtụtụ katalọgụ sitere n'aka ndị na-eweta ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ahụ zuru oke ịchọrọ. Biko kwenye na anyị nwere ike inye gị ahụmịhe ịzụ ahịa kachasị mma.